Asetenam Nsɛm: Mayɛ Biribiara Ama Nnipa Ahorow Nyinaa | Denton Hopkinson
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Denton Hopkinson anom asɛm
“Sɛ wobɔ asu a, megya wo ho akɔ!” Wei ne asɛm a me papa ka de hunahunaa me maame wɔ afe 1941 mu. Ahunahuna no nyinaa akyi no, me maame bɔɔ asu de kyerɛe sɛ wahyira ne ho so ama Yehowa Nyankopɔn. Enti me papa nso yɛɛ nea ɔkae no, na ogyaw yɛn hɔ. Saa bere no, na madi mfe nwɔtwe pɛ.
ANSA na saa asɛm no resi no, na manya nokware no ho anigye dedaw. Ná me maame agye Bible ho nhoma ahorow, na na m’ani gye emu nsɛm no ho paa, titiriw emu mfonini no. Ná me papa mpɛ sɛ me maame bɛkyerɛkyerɛ me nneɛma a ɔresua no. Nanso, mibisaa nsɛm pii efisɛ na mepɛ sɛ mete nneɛma ase. Enti bere biara a me papa nni fie no, me maame ne me suaa ade. Ɛno nti, me nso mihyiraa me ho so maa Yehowa. Wɔbɔɔ me asu bere a na madi mfe du wɔ Blackpool, England, afe 1943.
MIFII ASE SOM YEHOWA
Efi saa bere no rekɔ no, me ne me maame boom kɔɔ asɛnka daa. Ná yɛde gramafon na ɛka Bible mu asɛm kyerɛ nkurɔfo. Ná emu duru bɛyɛ nkaribo du (kilogram 4.5). Wo de, hwɛ sɛ wɔde afiri a emu yɛ duru saa asoa abarimaa kumaa te sɛ me!
Midii mfe 14 no, na mepɛ sɛ meyɛ akwampae adwuma. Enti me maame kae sɛ, me ne anuanom somfo (seesei wɔfrɛ no ɔmansin sohwɛfo) no mmɔ ho nkɔmmɔ. Anuanom somfo no hyɛɛ me nkuran sɛ minsua nsaanodwuma bi a mede bɛhwɛ me ho bere a mereyɛ akwampae adwuma no. Enti misuaa nsaanodwuma bi. Bere a meyɛɛ saa adwuma no mfe mmienu no, me ne ɔmansin sohwɛfo foforo bɔɔ akwampae adwuma no ho nkɔmmɔ. Onua no kae sɛ: “Yɛ nea wopɛ sɛ woyɛ no!”
Enti April 1949 no, me ne me maame tɔn nkongua a egu dan a na yɛahan no mu no bi, na yɛde bi nso kyɛɛ afoforo. Afei, yetu kɔɔ Middleton a ɛbɛn Manchester no kofii ase yɛɛ akwampae adwuma wɔ hɔ. Abosome nnan akyi no, mepaw onua bi sɛ nea me ne no bɛyɛ akwampae adwuma. Baa dwumadibea no kae sɛ me ne onua no ntu nkɔboa asafo foforo bi a na wɔatew wɔ Irlam. Me maame nso ne onuawa foforo boom yɛɛ akwampae adwuma wɔ asafo foforo mu.
Esiane sɛ na anuanom a wɔfata pii nni asafo foforo no mu nti, ɛwom sɛ na madi mfe 17 pɛ de, nanso wɔmaa me ne onua a ɔka me ho no hwɛɛ asafo nhyiam ahorow so. Akyiri yi, wɔma mekɔɔ Buxton Asafo a na emu adawurubɔfo nnɔɔso na wohia mmoa no mu. Mahu paa sɛ, dwumadi ahorow a wɔde maa me saa bere no siesiee me maa ɔsom hokwan ahorow a na wɔde bɛma me akyiri yi no.
Yɛne afoforo rebɔ baguam kasa ho dawuru wɔ Rochester, New York, 1953
Afe 1951 no, mehyehyɛɛ akwammisa krataa sɛ mepɛ sɛ mekɔ Ɔwɛn Aban Gilead Bible Sukuu. Nanso, December 1952 no, wɔtoo nsa frɛɛ me sɛ menkɔ sraadi. Meka kyerɛɛ wɔn sɛ meyɛ bere nyinaa somfo, enti wonyi me mfi mu. Nanso, bere a wɔde me kɔɔ asɛnnibea no, asɛnnibea no annye nea mekae no antom. Enti wɔde me too afiase abosome nsia. Bere a na meda afiase no na wɔtoo nsa frɛɛ me sɛ menkɔ Gilead adesuakuw a ɛto so 22 no bi. Enti July 1953 na mede po so hyɛn a wɔfrɛ no Georgic kɔɔ New York.
Bere a miduu New York no, minyaa hokwan kɔɔ Wiase Foforo Asafo Ɔmantam Nhyiam a wɔyɛe afe 1953 no bi. Ɛno akyi no, mefaa keteke kɔɔ South Lansing, New York, baabi a na sukuu no wɔ no. Esiane sɛ na woyii me fii afiase nkyɛe nti, na sika a ɛwɔ me ho sua. Enti bere a misi fii keteke no mu no, bɔs a meforo kɔɔ South Lansing no, mebɔɔ bosea sɛnt 25 fii obi a me ne no te bɔs no mu nkyɛn ansa na meretumi atua ka.
MEKƆSOMEE WƆ AMANNƆNNE
Gilead Sukuu no tetee yɛn paa ma yehuu sɛnea ‘yɛbɛyɛ biribiara ama nnipa ahorow nyinaa’ wɔ yɛn asɛmpatrɛw adwuma no mu. (1 Kor. 9:22) Wɔde me ne Paul Bruun, ne Raymond Leach kɔɔ Philippines. Yɛtwɛn abosome dodow bi ansa na yɛn nsa reka tumi krataa a yɛde betu kwan no. Ɛno akyi no, yɛtenaa po so hyɛn mu kɔfaa Rotterdam, Mediterranea Po, Suez Suka, India Po, Malaysia, ne Hong Kong. Yedii nnafua 47 wɔ po so! Yeduu Manila November 19, 1954.
Me ne Raymond Leach a me ne no yɛɛ asɛmpatrɛw adwuma no tenaa po so hyɛn mu nnafua 47 kɔɔ Philippines
Afei, mifii ase sɛ mesua amammerɛ foforo, ɔman foforo mu asetena, na masua kasa foforo. Nanso, mfiase no, wɔde yɛn baasa nyinaa kɔɔ asafo bi a ɛwɔ Quezon City mu. Ná asasesin no mufo pii ka Borɔfo kasa. Enti abosome nsia akyi no, Tagalog kasa no nsɛmfua kakraa bi pɛ na na yenim. Nanso, na ɔsom hokwan foforo a wɔde bɛma yɛn no bɛboa yɛn ama yɛate kasa no.
Da bi, wɔ May 1955 mu no, me ne Onua Leach fi asɛnka baa fie behui sɛ nkrataa bi a wɔakyerɛw abrɛ yɛn gu yɛn dan mu. Yehui sɛ wɔama yɛn ɔsom adwuma foforo sɛ yɛnkɔyɛ amansin so ahwɛfo. Ná madi mfe 22 pɛ, nanso ɔsom hokwan foforo yi ma ‘mebɛyɛɛ biribiara maa nnipa ahorow nyinaa’ wɔ akwan foforo so.
Merema baguam kasa wɔ Bicol kasa mu wɔ ɔmansin nhyiam ase
Nhwɛso bi ni. Baguam kasa a midii kan mae bere a mebɛyɛɛ ɔmansin sohwɛfo no, memaa no wɔ petee mu wɔ akuraase sotɔɔ bi anim. Ankyɛ na mihui sɛ, saa bere no, sɛ yɛka baguam kasa a, wɔ Philippines no, na wɔma no wɔ baguam ankasa! Bere a mesrasraa asafo ahorow a ɛwɔ ɔmansin no mu no, memaa kasa wɔ mpata ase, gua so, adan a ɔmanfo bɔ gua wom anim, mmeae a wɔbɔ baskɛtbɔɔl, mmeae a ɔmanfo tena gye wɔn ahome, ne mpɛn pii no, mmɔnten so wɔ nkurow akɛse mu. Bere bi, wɔ San Pablo City no, nsu tɔe ma mantumi amma baguam kasa wɔ gua so. Enti meka kyerɛɛ anuanom a wodi anim no sɛ yɛnkɔma ɔkasa no wɔ Ahenni Asa so. Ɛno akyi no, esiane sɛ yɛamma ɔkasa no wɔ baguam nti, na anuanom no ntumi nhu sɛ wɔnyɛ nhyiam no ho kyerɛwtohɔ sɛ baguam nhyiam anaa!
Ná metena anuanom fie bere nyinaa. Ɛwom sɛ na anuanom afie yɛ nketenkete de, nanso bere nyinaa na ɛhɔ tew. Ná metaa da kɛtɛ a wɔde asɛ fam so. Ɛhɔnom aguare no, sɛ obi gyina hɔ reguare a, na nkurɔfo a wɔwɔ abɔnten tumi hu no. Enti misuaa sɛnea meguare wɔ petee mu. Ná mede trotro ne bɔs na etutu akwan, na sɛ merekɔ nsupɔw foforo so a, ɛtɔ da a na metena hyɛmma mu. Mfe a mede ayɛ ɔsom adwuma no nyinaa mu no, minnyaa m’ankasa me kar da.
Asɛnka adwuma a meyɛe ne asafo ahorow a mesrasraa wɔn no boaa me ma misuaa Tagalog kasa no. Obiara anhyɛ da ankyerɛ me kasa no, na mmom sɛ me ne anuanom kɔ asɛnka a, na mitie nea wɔka no. Ná meyɛ saa ara nso wɔ asafo nhyiam ase. Ná anuanom pɛ sɛ wɔboa me ma misua kasa no, na m’ani sɔɔ sɛnea wonyaa me ho abotare ne sɛnea wɔtenetenee me no.
Bere kɔɔ so no, ɔsom hokwan afoforo a minyae no ma meyɛɛ nsakrae pii. Afe 1956 no, Onua Nathan Knorr baa Philippines, na yɛyɛɛ nhyiam kɛse bi. Wɔmaa me dwumadi sɛ me ne ɔmanfo nni nhyiam no ho nkitaho. Ná menyɛɛ adwuma a ɛte saa da, nanso afoforo yii wɔn yam boaa me. Bɛyɛ afe baako akyi no, yɛsan yɛɛ nhyiam kɛse a ɛte saa wɔ ɔman no mu. Onua Frederick Franz a na ɔwɔ wiase nyinaa adwumayɛbea ti no baa bi. Ná meyɛ nhyiam no sohwɛfo, na misuaa biribi fii sɛnea Onua Franz bɔɔ mmɔden sɛ ɔne nkurɔfo no bɛbɔ no mu. Anuanom a wɔwɔ hɔ no ani gyei sɛ Onua Franz hyɛɛ Philippinesfo atade a wɔfrɛ no barong Tagalog no maa baguam kasa no.
Bere a wɔpaw me sɛ ɔmantam sohwɛfo no, ɛho behiae sɛ mesan yɛ nsakrae foforo. Saa bere no, ɛkame ayɛ sɛ na yeyi sini a wɔato din The Happiness of the New World Society no wɔ mmɔnten so bere nyinaa. Ɛtɔ mmere bi a, na nkoekoemmoa haw yɛn. Afiri a yɛde yi sini no kanea na na ɛtwetwe wɔn. Sɛ wɔkɔhyɛ afiri no mu a, na wɔaka mu. Sɛ yeyi sini no wie na yɛreyiyi nkoekoemmoa no afi afiri no mu a, na ɛyɛ adwuma kɛse paa! Ná nhyehyɛe a yɛyɛ de yi sini no nna fam. Nanso, bere a yeyii sini no kyerɛɛ nkurɔfo ma wohui sɛ Yehowa ahyehyɛde no wɔ wiase baabiara no, ɛmaa yɛn koma tɔɔ yɛn yam.
Wɔ mmeae bi no, Katolek asɔfo hyɛɛ atumfoɔ no sɛ mma wɔmpene mma yɛnyɛ nhyiam. Bere biara a yɛbɛma ɔkasa wɔ baabi a ɛbɛn wɔn asɔredan no nso, na wɔbɔ wɔn dɔn denneennen de tuatua yɛn aso. Nanso, adwuma no nyaa nkɔso. Seesei nnipa pii a na wɔwɔ mmeae a ɛte saa abɛyɛ Yehowa asomfo.
ƆSOM HOKWAN AHOROW A ƐMA ƐHO BEHIAE SƐ MEYƐ NSAKRAE PII
Afe 1959 no, me nsa kaa krataa sɛ menkɔsom wɔ baa dwumadibea. Wei ma misuaa nneɛma foforo pii. Bere bi akyi no, wɔma mekɔsrasraa baa dwumadibea ahorow wɔ aman foforo so sɛ dantaban sohwɛfo. Saa nsrahwɛ no mu baako mu na mihuu Janet Dumond. Ná ɔyɛ ɔsɛmpatrɛwfo wɔ Thailand. Yedii nkrataakyerɛw kosii bere bi, na akyiri yi, yɛwaree. Yɛabom asom sɛ awarefo mfe 51 ni.
Me ne Janet wɔ Philippines nsupɔw pii no baako so
Yɛka ne nyinaa bom a, masrasra Yehowa nkurɔfo wɔ aman 33 so. Ɛyɛ me anisɔ paa sɛ ɔsom hokwan ahorow a midii kan nyae no siesiee me ma mihuu sɛnea me ne nnipa ahorow nyinaa bɛtena! Saa nsrahwɛ yi abue m’adwenem paa, na aboa me ama mahu sɛnea Yehowa da ne dɔ adi kyerɛ nnipa ahorow nyinaa.—Aso. 10:34, 35.
Yɛkɔ asɛnka bere nyinaa
MEDA SO ARA REYƐ NSAKRAE
Yɛn ani agye paa sɛ yɛne yɛn nuanom a wɔwɔ Philippines abom resom! Adawurubɔfo dodow a na ɛwɔ ha bere a edi kan a mebaa ha no abu abɔ ho mpɛn du seesei. Me ne Janet da so resom wɔ Philippines baa dwumadibea a ɛwɔ Quezon City no. Ɛwom sɛ mede bɛboro mfe 60 na asom wɔ amannɔne de, nanso mahu sɛ ɛho da so ara hia sɛ meyɛ nsakrae na meyɛ nea Yehowa bɛka biara. Nsakrae a wɔayɛ wɔ ahyehyɛde no mu nnansa yi ama ɛho abehia sɛ yɛkɔ so da ntease adi wɔ Onyankopɔn som mu ne bere a yɛresom yɛn nuanom.
Adansefo dodow a ɛrenya nkɔanim no ma yɛn ani gye bere nyinaa
Biribiara a yehu sɛ Yehowa na ɔrekyerɛ sɛ yɛnyɛ no, yegye tom, na wei ama yɛanya abotɔyam paa. Yɛabɔ mmɔden nso sɛ yɛbɛyɛ nsakrae biara a ɛho hia na ama yɛatumi asom yɛn nuanom yiye. Nokwasɛm ne sɛ, yɛasi yɛn bo sɛ, sɛ ɛyɛ Yehowa pɛ a, yɛde yɛn nkwa nna a aka nyinaa ‘bɛyɛ biribiara ama nnipa ahorow nyinaa.’
Yɛda so ara resom wɔ baa dwumadibea wɔ Quezon City